माओवादका खोल ओडेका प्रतिकृयावादीहरु भ्रम शृजना गर्ने कारखाना हुन् – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
थप २६०७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, ३९ जनाको मृत्यु
नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सानेपामा सुरु
आज सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अंकले घट्यो
एमाले माधवको स्थायी कमिटीद्धारा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्यलाभको कामना
जलजला २, टमिलाखर्कका करिब १६ घरधुरी पहिरोको जोखिममा
वस्ती नै पहिरोको जोखिममा पर्दा जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला किन मौन ?
अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन र आपूर्तिसहित ‘स्मार्ट लक डाउन’ तर्फ जाने निर्णय
माओवादका खोल ओडेका प्रतिकृयावादीहरु भ्रम शृजना गर्ने कारखाना हुन्
यस्ता किसिमका आशंका र भ्रम निवारण गरौ, कमजोरी छन् भने सुधार गरौ । तर नियोजित र षडयन्त्रपूर्ण ढंगले सिर्जित कथामा आधारित कुप्रचारवाट आफु पनि जोगियौ र समाजलाई पनि त्यसको कुप्रभावबाट जोगाऔं । सरकारको निर्णयलाई नागरिक अधिकारलाई सिमित पार्ने अपव्याख्या गर्नु नागरिक अधिकार प्रतिको वेइमानी ठर्हछ ।
लेखक : धिरेन्द्र आचार्य
प्रकासित : ३० चैत्र २०७६, आईतवार
वर्तमान आजको परिबेशमा बिश्व जगत, कोभिड १९ बिरुद्धको संघर्षमा जुधिरहेको छ । बिश्वका धेरै मुलुकहरु यही कोरोना भाइरसका कारणले लकडाउनमा छन् र हाम्रो राष्ट्र पनि कोरोना भाइरसका कारणले लकडाउन कै अवस्थामा रहेको छ । कोभिड १९ विरुद्धको यो लडाइमा मुख्य संयोजनकर्ता राज्य नै हो । संक्रमण फैलन नदिन सामाजिक दुरी सबैभन्दा ठुलो हतियार हो । लकडाउन सोही प्रयोजनका लागि गरिएको पनि हो । त्यहि अनुसार, कोभिड १९ को संक्रमण बिरामीको उपचार नेपाल सरकारले लिएको छ ।
संसारका सबै देशमा अनेक प्राकृतिक विपत्तिमा सेनाले विशेष भुमिका खेल्ने गरेका छन् । चीनले कोरोना महामारी विरुद्धको युद्धमा अग्रपंतिमा सेनाको सुविचारित परिचालनले नै सफलता हासिल गरेको हो । अमेरिका, वेलायत, ईटाली, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, लगाएतका देशले सेनालाई नै अगाडि सारिएको छ । नेपाली सेना नेपालका हरेक विपत्तिमा परिचालित भएर प्रसंसनीय काम गरेर जनविश्वास जित्दै आएका अनेकौं उदाहरणहरु छन् । सेना राज्यको प्राविधिक र व्यवसायिक ज्ञान भएको संगठित र अनुशासित अग्रदस्ता हो । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नेपाल सरकारका निर्णय, आदेश र निर्देशन पालना गर्नु सेनाको कर्तव्य पनि एक हो । नेपाल सरकारले पनि सोही अनुसार संविधान र कानुनका सिमाभित्र रहेर जनताको जीवन रक्षाका लागि सेनालाई कुनै विशेष जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्यो । तर , नेपाल भित्र माओवादको खोल ओडेका केहि प्रतिकृयावादी राता मण्डलेहरुले अहिलेको परिस्थितीमा पहिले जस्तै लुट्न र भ्रष्टचार गर्न नपाएपछी आफूलाई भ्रम शृजना गर्ने कारखानाको रुपमा बिकास गर्दै सामाजिक संजाल, मिडियाहरुमा रोई कराई गर्दै सरकार र आफ्नै पार्टीको चरित्र हत्या गर्न दिन दुई गुणा र रात चार गुणा लागि परेका छन । लुट्न र भ्रस्टचार गर्न पाइन्छ की भन्ने दिवा सपना अझै देख्न छोडेका छैनन ! उनीहरुले, ती लुटेका दिनहरु गाऊ खाने कथामा सिमित भैसकेको कुरा बुझ्न जरुरी छ । अब लुट्न पाउदैनौं भन्ने कुरा हेक्का राख्नू पर्दछ ! विरोधलाई आफ्नो कर्तव्य र बिचार मान्ने दरिद्र मानसिकता बोकेकाहरु विपत्तिमा सेनाको परिचालनको विषयलाई निकै उचाली रहेका छन् । यो कस्तो चिन्तन हो ? जनतालाई मुर्ख बनाउनुको पनि सिमा हुन्छ नी ?
लुट्न र भ्रस्टचार गर्न पाइन्छ की भन्ने दिवा सपना अझै देख्न छोडेका छैनन ! उनीहरुले, ती लुटेका दिनहरु गाऊ खाने कथामा सिमित भैसकेको कुरा बुझ्न जरुरी छ । अब लुट्न पाउदैनौं भन्ने कुरा हेक्का राख्नू पर्दछ ! विरोधलाई आफ्नो कर्तव्य र बिचार मान्ने दरिद्र मानसिकता बोकेकाहरु विपत्तिमा सेनाको परिचालनको विषयलाई निकै उचाली रहेका
छन् । यो कस्तो चिन्तन हो ? जनतालाई मुर्ख बनाउनुको पनि सिमा हुन्छ नी ?
बिगतलाई हेर्ने हो भनेपनि , दासढुंगा हत्याकाण्डको केही समय पछि तत्कालिन समयमा प्रकाशित हुने जनधारणा साप्ताहिकमा उक्त हत्याकाण्डको रहस्य उजागर गर्ने नाममा काल्पनिक कथा रचेर तत्कालिन एमाले नेतृत्वलाई वदनाम गर्ने नियोजित षड्यन्त्र रचिएको थियो । तर, पछि त्यस नियोजित षड्यन्त्रको पटाक्षेप भयो र पत्रिकाको पनि अवसान भयो । यतिवेला पनि कतिपय पत्रिका र अनलाईनहरुका नियोजित समाचारहरुको श्रृंखला हेर्दा सरकार विरुद्ध त्यही फर्मुलाको प्रयोग हुदैछ जस्तो देखिन्छ । षड्यन्त्र पूर्ण र नियोजित समाचारहरुबाट समाज नै भ्रमित हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो राष्ट्रका लागि ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ र पनि मुखमा रामराम बगलीमा छुरा राखेर हिडिरहेका केहि अवसरवादी एम् प्रतिगामी तत्वहरुले भ्रम शृजना गरिरहेका छन । यस्ता किसिमका आशंका र भ्रम निवारण गरौ, कमजोरी छन् भने सुधार गरौ । तर नियोजित र षडयन्त्रपूर्ण ढंगले सिर्जित कथामा आधारित कुप्रचारवाट आफु पनि जोगियौ र समाजलाई पनि त्यसको कुप्रभावबाट जोगाऔं । सरकारको निर्णयलाई नागरिक अधिकारलाई सिमित पार्ने अपव्याख्या गर्नु नागरिक अधिकार प्रतिको वेइमानी ठर्हछ । राज्यका अंग, निकाय र संयन्त्रलाई विश्वास गरौ । यीनको अधिकतम उपयोग गरी कोरोना विरुद्धको लडाईमा नेपाललाई विजयी बनाउनु पर्ने कर्तब्य हामी सम्पुर्ण अग्रगामी नेपालीहरुको काधमा
प्रकासित : ३ असार २०७८, बिहीबार
विश्व बैंकले नेपाललाई १५ करोड अमेरिकी डलर (१७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ) ऋण दिने
अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने
काठमाडौं महानगरपालिकाद्धारा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी प्रभावितलाई २ करोड रुपैयाँ सहयोग